Wasiir Sebriye: “Ahlu-Sunna waxay ku gor-gor tamaysaa Dhuusamareeb” | Somsoon
Home WARAR Wasiir Sebriye: “Ahlu-Sunna waxay ku gor-gor tamaysaa Dhuusamareeb”
Wasiir Sebriye: “Ahlu-Sunna waxay ku gor-gor tamaysaa Dhuusamareeb”
Wasiirka Arrimaha Gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Serbiye oo shir jaraa’id uu kula hadlayay shacabka caawa ku qabtay Dhuusamareeb ayaa eedeymo badan u jeediyay Ahlu-Sunna Waljamaaca.
Wasiir Sebriye Waxuu soo bandhigay nuxurka iyo u jeedka ilaa afar warqadood oo bilihii u dambeeyay ka soo kala baxay Ahlu-Sunna iyo dowladda federaalka.
Ugu horey waxa uu sheegay wasiir Sebriye in dhismaha maamulka Galmudug oo maraya wajigii ugu dambeeyay ay caqabad ku noqotay Ahlu-Sunna Waljamaaca oo wada gor-gortan ay doonayaan xildhibaano badan.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in Dowladda Federaalka oo xil iska saareysa sidii maamul loogu dhisi lahaa Galmudug ay Ahlu-Sunna ku xujeysay in la siiyo kala bar xildhibaanada uu yeela doono, hadaan taas loo sameyna aysan Dhuusamareeb doorash ka dhaceyn.
Waxa uu sheegay inay Ahlu-Sunna ku war galiyeen in taasi aysan suurta gal aheyn awoodna aysan dowladdu u laheyn in loo balan qaado saamigaas oo soo xulidda xildhibaanada ay tahay waajib dastuuri ah oo ay leeyihiin odayaasha dhaqanka, balse ay kala codsa doonaan wixii macquul ah.
Wasiir Cabdi Sebriye ayaa sheegay in Ahlu-Sunna ay ku kalsoonaa weysay warqad uu soo saaray 20-kii June ee sanadkaan oo ay dowladdu ugu ogolaatay 35 xildhibaan, iyadoo la gaarin fulin balankaasna ay qaaday talaabooyin carqaladeynaya.
Warqad isla maalintaas ka soo baxday xaafiiska Sheikh Shaakir ayuu sheegay inay muujinaysay jaha wareer heysta Ahlu-Sunna oo aan kala aqoon Galmudug iyo AHSJ, shakhsi ahaana uu u arkayay fudeyd iyo kalsooni daro, isla markaana aysan jirin baahi ku qasbeysay Ahlu-Sunna in ay soo saarto warqadaas.
Wasiir Sebriye ayaa soo bandhigay warqad kale oo ay Ahlu-Sunna u dirtay beesha caalamka, sida QM, USA, IGAD, UK, Turkiga iyo wadamo kale, taas oo uu sheegay inay uga dacwoonayeen dowladda federaalka.
Qodobo ku jiray waraqadaas oo sida uu sheegay ka yaabiyay xad gudubna ku ah dowladnimada sida uu sheegay ayaa waxaa ka mid ahaa:
In weerar la doonayey in lagu khaarajiyo Sheikh Shaakir uu ka dhacay xaafiiskiisa.
In ciidamada ay tababareen Turkiga, kuwa ay tababartay dowladda Mareykanka ee Danab iyo ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM loo adeegsanayo dadka reer Galmudug.
In xasarad ay dowladdu ka abuurtay Galmudug ay caqabad weyn ku noqotay dagaaalka ay ciidamada Ahlu-Sunna Waljamaaca kula jiraan argagixisada qarkana ay u saaranyihiin inay soo baneeyaan furimaha dagaalka.
Mar uu ka hadlayay guddiyada iska garab magacaaban ayuu sheegay wasiirku in Ahlu-Sunna ay xujo ka dhigtay in iyadoo aan matalin madaxda kale ee Galmudug ay soo magacaabato kala bar xubnaha guddiga.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay wasiirku in dhismaha maamulka Galmudug uu waajibka koowaad ka saaranyahay wasaaradda arrimaha gudaha, isla markaana aan loo sii xayirnaa doonin shakhsiyaad ama Urur gaar ah.
Ahlu-Sunna ayuu ku eedeeyay in aysan daacad ka aheyn dhismaha maamul cusub oo ay yeelato Galmudug, isla markaana looga durbaan tumayo meelo kale, isagoo ugu maahmaahay “Nin aan kuu furi doonin yuusan kuu rarin”
Article horeDowladda Uganda oo ka been abuurtay Muwaadin Soomaaliyeed, Daawo
Article socoda Daawo: Sidee ayay ku timid in mushaarka loo kordhiyo Ciidamada DF?